Beesha caalamka oo ka walaacsan doorashada Jubbaland – GEELLE MAG
Beesha caalamka oo ka walaacsan doorashada Jubbaland
Kismayo Reporter Posted On August 15, 2019
War ay soo saareen wafdi beesha caalamka ee uu hogaaminayey ayaa lagu sheegay in ay walaac baahsan uu ka muuqda qaabka loo maamulayo doorashada Jubbaland.
Masulliyiin sare oo ka socday Midowga Afrika, ururka IGAD, iyo Qaramada Midoobey ayaa maanta Kismayo tagay si ay ula kulmaan maamulka, musharixiinta, bulshada iyo odeyaasha dhaqanka xilli ay si murgayso qaabka doorashada Kismayo uga socoto.
War qoraal ah oo lagu shaaciyey bogga qaramada midoobey xafiiskeeda Soomaaliya ayaa lagu sheegay ” in ay garwaaqsadeen in geedi socodka doorashadu yahay mid aad loogu kala fikir duwanyahay sida awgeedna ay ka warwarsanyihiin hadii xaaladu saan sii ahaato in xaalada deganaanshaha deeganada Jubbaland wax u dhimi karto. Xilligan waxa muhiim ah in la ilaaliyo deganaanshaha iyo midnimada dadka deegaanka.”
Midowga Afrika, ururka IGAD, iyo Qaramada Midoobey waxa ay ku baaqeen in hal wadiiqo oo lagu wada heshiis yahay la raaco oo wafaaqsan dastuurka Jubbaland iyo dastuurka kumeel gaarka ah ee Soomaaliya.
Dawalada Soomaaliya ayaa gaahsaanka u daruurtay qaab doorashada Jubbaland kuna tilmaamta mid aan sax ahayn. Kala duwanaanshaha fikirka dawladda dhehxe iyo tan Jubbaland ayaa waxa uu kusoo shaac baxay kadib markii dawladda Soomaaliya soo saarta qoraal ay ku diidantahay qaabka wax u socdaa. Waxa ay soo xigteen dastuurka iyaga oo sheegay in qaabka xulistu uu san waafaqsanayn dastuurka. Dawladda Federalka ayaa si rasmi ah u codsatay in in si wada jira ay Jubbaland iyo dawladda dhexe u wada ansixiyaan odeyaasha dhaqanka ee soo dooranaya xildhibaanada. Waxa kale oo ay dawladda Federalka ka hortimi in wax ka badan hal xubin loo soo xulo golaha wakiilada.
Midowga Afrika, IGAD iyo Qaramada Midoobey ayaa sheegay in dalbadeen” In dib u eegid lagu qaab doorashada ee Jubbaland kaas oo ay hogaaminayso guddiga doorashada iyo Xuduudaha ee Jubbaland si loo xaqiijiyey hufnaanta iyo xalaal ahaanta nidaamka doorashada.” Qoraalka ayaa lagu sheegay.
Wararka ayaa sheegaya in Axmed Madoobe oo iminka hogaamiya Jubbaland oo sheegay in dalabaadka beesha caalamka uunan isagu waxba ka qaban karin oo ay tahay mid u taal guddiga doorashada Jubbaland iyo goolaha wasiirada ee Jubbaland.
Doorashada madaxtinimada Jubbaland oo ay hogomaaniyaan guddiga doorashada ay beesha ay ka biyo diideen beesha caalamku waxa la qabanayaa Isniinta.
Kismayo Reporter October 27, 2019
Kismayo Reporter October 22, 2019